ကျွန်းပေါ်မှ ဖြစ်ရပ်များ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
August 14, 2008, 4:56 am Filed under: My Opinion ၁) စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားခဲ့သူများ
အခုတစ်လော ပါစင်နယ်ကိစ္စတွေနဲ့ ဘယ်ကိုမှ ခြေဦးမလှည့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မအတွက် ကိစ္စတော်တော်များများကို နောက်ကျမှ သိလိုက်ရပါတယ်။ အကုန်လုံးကို သေသေချာချာ လေ့လာဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှ စိတ်မကောင်းခြင်းတစ်ဝက် အားမလို အားမရဖြစ်ခြင်းတစ်ဝက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေးများဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက် တော်တော်လေး ဂယက်ထခဲ့ပါတယ်.. ။ သေချာတာတော့ ထိုလူများဟာ ပျော်လွန်းလို့ အပျော်လုပ်ခဲ့ကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အခြေအနေအရ ဘာတွေကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နိုင်ရမှာလဲဆိုတာ အဆိုးဆုံးထိ တွက်ချက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ယခု လက်ရှိအချိန်မှာ အဆိုးဆုံးကို ရင်ဆိုင်ကာ ထွက်ခွာသွားရတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာများအတွက် စိတ်မှ ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရချိန်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ပုထုဇဉ်လူသားပီပီ ကျွန်မ စိတ်ထိခိုက်ရတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ထွက်ခွာသွားရတဲ့လူတွေနှင့် ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရသူတွေအားလုံးကို နာမည်နှင့် လူတွဲပြီးတောင် ကျွန်မ သိပ်မသိပါဘူး .. ။ လူချင်းမသိကြပေမယ့် စိတ်သဘောထားချင်း သိနေပြီးသား လူတွေအတွက် အနည်းနှင့်အများတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ။
ဒီလူတွေကတော့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန် ၊ ဘ၀အချိုးအကွေ့တွေ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘေးမှနားခါးစရာတွေကလည်း များပြားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ မိမိအိတ်ထဲက မိမိစိုက်ထုတ်ပြီး ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ဘဲ လုပ်နေကြချိန် မဆီမဆိုင် အမြတ်ထုတ်သူများအကြောင်းနှင့် ရောမွှေပြောဆိုခြင်းများကလည်း ဒုနဲ့ဒေး ။ဘ၀မှာ ဘယ်အရာမဆို မှန်ကန်ရဲရင့်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ လေးနက်သော စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုများ ၊ သစ်လွင်သော ခြေလှမ်းများကို အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဟာ သီအိုရီစာအုပ်ကြီးတွေ ကိုင်ပြောကာ Analyse လုပ်နေသူများ မဟုတ် ၊ လေသေနတ်များ တဖောက်ဖောက် ဖောက်နေသူများ မဟုတ် … ၊ စာရွက်တွေပေါ်သာ ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းနှင့် ပြောဆိုနေကြပြီး ပြင်ပကမ္ဘာတွင် မရင်ဆိုင်ဖူးသူများ မဟုတ်ကြပါ။ ပြင်ပတွင် လက်တွေ့ ရင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သူများသာလျင် အရာအားလုံးကို ထိုးထွင်းသိမြင် ၊ ရဲရင့်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြ ၊ အတွေ့အကြုံများ ကြွယ်ဝကြပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ Facts ကို မပြောဘဲ ခံတဲ့လူတွေက တကယ်ခံနေရချိန်မှာ သွေးစည်းမှုဆိုတာ ဝေလာဝေး .. အပေါ်ကနေ ထပ်ထောင်းဝေဖန်အပြစ်တင်ဖို့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နေသူများကို အမှန်တကယ် စိတ်ကုန်ပါတယ်။ ဒါ `မြန်မာ´လားဆိုတောင် တွေးရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျနေခြင်းမှာ ပျော်လွန်း၍ မဟုတ် ၊ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့လို လူစားမျိုးတွေ ဘ၀ကိုပေးဆပ် ထောင်နှင့်အိမ် ကူးနေရတာ လုပ်စရာမရှိ၍ မဟုတ်။ သူတို့၏ မှန်ကန်သော ယုံကြည်ချက်သစ္စာအတွက် ပေးဆပ်ထားသော ဘ၀များက ပြည်သူလူထုနှင့် အနောက်မှ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူများအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ အားမာန်တစ်ခု။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ မိမိအတွေးအခေါ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အကောင်ထည်ဖော်ချင်ကြလျင် ခြေလှမ်းတစ်ကို မိမိဘက်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပြရပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံအတွက်ဆို ရောက်ရာနေရာမှ အကောင်းဆုံး ခြေလှမ်းတွေကို စတင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တတ်နိုင်တဲ့ ဘောင်တစ်ခုထဲက အကောင်းဆုံးကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသူများကို ထိုင်ကာ အပြစ်တင်ဝေဖန်နေခဲ့လို့ နှစ်(၂၀)ပင် ကြာခဲ့ပြီ မဟုတ်လော ။
၂) စင်္ကာပူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ
စင်္ကာပူမှာ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေ ဒီလိုရင်ဆိုင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေ ဖြစ်ရတာကို မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးသိချိန်မှာ `ငါတို့တွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် ၊ ဘယ်လောက် ပညာတတ်တတ် … ဆင်းရဲဒုက္ခအတိရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံကလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်။ ငါတို့ ပြည်ပမှာ ဒီလိုဒုက္ခတွေကို အမျိုးမျိုး ခါးသီးစွာ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ငါတို့နိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အမြန်ဆုံး ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှသာလျင် ငါတို့ရဲ့ အိမ်အစစ်မှာ ငါတို့နေရလိမ့်မယ်´ ဆိုသော အတွေးမက်ဆေ့ခ်ျလေး ၀င်သွားလျင် ဘ၀အကွေ့အကောက် ရင်ဆိုင်ရသော ပြဿနာများ တန်တယ်ဟု ကျွန်မ တွေးခဲ့မိပါတယ်။
ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာများအတွက်လည်း အမှန်စင်စစ် လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်ပေးနေကြသော ပြည်ပရောက် မြန်မာများ၏ ကြိုးစားမှုကို အားရ၀မ်းသာမှုနှင့်အတူ စိတ်ဓါတ်များ ပိုမငယ်သွားစေချင်သော စေတနာဖြင့် ကျွန်မ တွေးခဲ့ပါတယ် .. ။ လက်တွေ့မှာ တော်တော်လေး လွဲသွားတာကို အခက်ခဲတွေ ရင်ဆိုင်ရမှပဲ လူတွေအကြောင်း သိရပါတော့တယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ ကောင်းကွက် ၊ ဆိုးကွက်တွေ နှစ်ခုလုံး ရှိနေပါတယ်။ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ၊ ပညာရေး အတော်အသင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မှု ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု အစရှိသော ကိစ္စများကလွဲ၇င် ကျန်သောအရာများမှာ အများကြီး လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် နာစရာလည်း မလိုပါဘူး။ အရှေ့ ၊ အနောက်အတွက် ဆက်သွယ်ပေးထားသော နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အာရှတိုက်က ပညာတတ်သူတွေရော ၊ မတတ်သူတွေရော အလုပ်လာလုပ် နေထိုင်ကြပါတယ်။ နေထိုင်ခွင့်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်း ပညာတတ်သည့်တိုင်အောင် အဆင်ပြေမှု ရခြင်းမရှိပါဘူး။
မိမိအရည်အချင်းကို အရင်းပြုကာ ဥစ္စာလာရှာကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအားလုံးနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ အပြန်အလှန် Contribute လုပ်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေဖို့ ၊ စားဖို့ အပါအ၀င် မိမိစရိတ်အားလုံးကို မိမိကပဲ အကုန်တာဝန်ယူပြီး မိမိအရည်အချင်းနှင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြခြင်းပါပဲ။ `ကျေးဇူးရှင်´ဆိုသော စကားလုံးအတွက်ကတော့ မိမိကို ကူညီမှုတွေ ရှိမှသာလျင် ကျေးဇူးရှင်ဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည် မြန်မာတွေအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်နေရာပေးနေတဲ့ နိုင်ငံများသာလျင် ကျေးဇူးရှိသော နိုင်ငံများ ဖြစ်ပါတယ်။
တလောက Strait Times သတင်းစာ ဖိုရမ်မှာ အမှန်တရားကို လက်တွေ့ကျကျ ပြောသွားသည့် ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ၊ ဆွီဒင်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားသော စလုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့် စလုံးမှ ၀န်ကြီးအမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဆွေးနွေးခန်းကို ဖတ်မိသူများ ဆက်လက်နာနေနိုင်သေးလော စဉ်းစားခန်းဖွင့်ကြပေတော့ ..။
၃) ကျွန်းပေါ်ရောက် အတွေးများ
ဤမြေပေါ်နေလျင် ဤမြေ၏ စည်းကမ်းကိုတော့ လေးစားရမယ်ဆိုတာ သင့်လျော်ပါတယ်။ လူ့လောကကြီးမှာ လူတွေရဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို တသမတ်တည်းတော့ ထားလို့မရပါဘူး .. ။ တခါတလေ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ၊ လူတွေမှာ ရွေးချယ်မှု မရှိတော့တဲ့အခါ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် တုံ့ပြန်မှုဆိုတာကလည်း မျှမျှတတ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အမုန်းပွားဖို့လည်း မလို ၊ မနှစ်သက်ခြင်းအချို့လည်း ဖျောက်ရန်မလွယ်တဲ့ အခြေအနေမှာ တိုးတက်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာကတော့ တော်တော်များများကျဆင်းသွားတာ အမှန်ပါပဲ။
မိမိနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဟု ယူဆသော လူတွေကတော့ long term မှာ အသိဥာဏ်ပညာကို အပွင့်လင်းဆုံးဖြစ်အောင် သင်ကြားခွင့် မရသော မြေပေါ်မှာ မိမိရွေးချယ်မှုဖြင့် ရာသက်ပန် ရှင်သန်နိုင်ကြသလို ၊ အသိဥာဏ်ပညာနှင့် လူတစ်ယောက်၏ အခွင့်အရေးကို ဟန့်တားခြင်းမရှိဘဲ သဘာဝတရားကြီး ပေးအပ်ထားသည့်အတိုင်း သိမြင်ထိုးထွင်း တတ်မြောက်ချင်သူများကတော့ မိမိရွေးချယ်မှုနေရာများမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ကြပါတယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာများဖြင့် ပျော်မွေ့နိုင်သော Materialism လူတွေတောင်မှ မိမိဘ၀မှာ တစ်ခုခုသာ ရင်ဆိုင်လာရပါက မျှမျှတတ ဖြစ်ချင်ကြတာ လူတိုင်း၏ဆန္ဒပါပဲ .. ။ မိမိကို မထိမချင်းတော့ မကောင်းတဲ့ လူ့သဘာဝအတိုင်း ပြောဆိုကျင့်ကြံနေကြတာတော့ မကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။
သေချာတာတော့ မှန်ကန်ခိုင်မာသော ယုံကြည်ချက်ကို စေတနာဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ထားသူများက မပြီးဆုံးသော လမ်းခရီးကြီးကို ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြလျက် .. ။
ဘ၀မှာ လူတစ်ယောက်၏ ရှင်သန်မှုမှတ်တမ်းနှင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြယုဂ်ဆိုတာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်သည့်အခါ သမိုင်းကသာလျင် အဓိက သက်သေပြသွားမှာပါပဲ။
“A most insidious form of fear is that which masquerades as common sense or even wisdom, condemning as foolish, reckless, insignificant or futile the small, daily acts of courage which help to preserve man’s self-respect and inherent human dignity.”
“အကြောက်တရားရဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မသိမသာ အန္တရာယ်အပေးဆုံး အသွင်သဏ္ဍန်တမျိုးကတော့…..
လူ့တန်ဘိုးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာမညှိုးနွမ်းရလေအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့အတွက် သတ္တိစွမ်းပြတဲ့ နေ့စဉ် စွမ်းဆောင်ချက်ကလေးတွေကို မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရပ်၊ မဆင်မခြင်လုပ်ရပ်၊ မပြောပလောက်တဲ့လုပ်ရပ် (ဒါမှမဟုတ်) အကျိုးမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ရယ်လို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြောဆိုတတ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ် ဖြစ်လေသယောင် (သို့မဟုတ်) ပညာဉာဏ်ပင်ဖြစ်လေသယောင် အရေခြုံဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ အကြောက်တရားမျိုးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
I do respect the courage of all the Burmese activists in Singapore and I also repect you for standing together with them during this very hard time and your courage of showing your stance clearly to the others. Good job , Sis.
Comment by TL
August 14, 2008 @ 6:22 am Reply	ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးပါ မလင်းလက်ရေ။
ကျနော့်အမြင်ပြောရရင် နိုင်ငံတနိုင်ငံကို ရောက်ရင် သူ့နိုင်ငံရဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကို လေးစားရမယ်ဆိုတာ လူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အစိုးရက လူထုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဘို့ ထုတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေဆိုရင်တော့ မှန်ပါတယ် မလင်းလက်ရေ။ အစိုးရအာဏာမြဲဘို့အတွက် လူထုကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေတွေဆိုရင်တော့ သူ့နိုင်ငံသားတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးတာကို ပိုမိုနည်းလမ်းကျပါတယ်။ ပိုပြီးလည်း မြင့်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာပြည်မှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ သူ့နိုင်ငံက ဥပဒေကို လေးစားတယ်ဆိုပြီး နအဖ အစိုးရအလိုကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နအဖအစိုးရရဲ့ ဥပဒေတွေက မြန်မာပြည်သူ့အကျိုးကို ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအလိုကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတွေ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာလူထုကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်လို့ပါဘဲ။ အလားတူပါဘဲ။ စင်္ကာပူမှာ လာရောက်နေထိုင်ရင် စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်တာထက် စင်္ကာပူပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားတာက ပိုမိုသင့်လျော်ပါတယ်။ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ဥပဒေက လူသားတန်ဘိုးကို အလေးမထားတဲ့ဥပဒေ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မလေးစားတဲ့ ဥပဒေမျိုးဆိုရင် အဲသည်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ဖီဆန်တာဟာ မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
တချို့မြန်မာတွေက အတွေးအခေါ် ကျွန်စော်နံလှသဗျာ။ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးတမျိုးလို မတွေးခေါ်ဘူး။ မကျင့်ကြံဘူး။ ကျွန်လိုဘဲ တွေးခေါ်ပြုမူကျင့်ကြံနေကြတယ်။
ဘယ်သူနဲ့ မပေါင်းရဘူး။ ဘယ်ဝါနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မဆက်ဆံရဘူး။ အတိုက်အခံနဲ့ မရောထွေးသင့်ဘူး။ ဘယ်နှယ့်ဗျာ…. ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်တူနေရင်တော့ ကိုယ်ပေါင်းချင်တဲ့လူနဲ့ ပေါင်းမှာပေါ့။ ဒါ..ရာဇ၀တ်မှုမှ မဟုတ်တာဘဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကို (သူများကို အနှောက်အယှက်မပေးသရွေ့) ကိုယ်ကြိုက်သလို ရွေးချယ်နေထိုင်ခွင့်ရှိတာဘဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနေမှာလား။ လီကွမ်းယူ စိတ်တိုင်းကျနေမှာလား။ ဗမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ဘို့ဆိုရင် မြန်မာတွေအနေနဲ့ အဲသည်လို ကျွန်စော်နံတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို စွန့်ပစ်သင့်ပါပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
မလင်းလက်ရဲ့ ပို့စ်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Comment by Ko Paw
August 14, 2008 @ 6:40 am Reply	မြန်မာ့အရေးကို တကယ် စွန့်လွှတ်ပြီး လုပ်တဲ့သူရော၊ မလုပ်တဲ့သူရော တူညီချက်သောဆန္ဒကတော့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြှင့်မားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကမ္ဘာ့နဲ့ယှဉ် ရင်ဘောင်တန်းကာ ငါ … မြန်မာ လူမျိုးဟေ့လို့ ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ပြောချင်ကြမှာပါ။
အဲ့ဒီလို နိုင်ငံမျိုးဖြစ်လာအောင် မိမိအပါအ၀င် မိမိ မိသားစုကို ဥပေက္ခာပြုပြီး မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နေသူများဟာ လူသားတွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ မှန်ကန်တိကျမှု ရှိချင်လည်း ရှိမယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ မှားယွင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို တတ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေတာကို အားပေးတယ်၊ ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် မှားသည် မှန်သည်က အဓိကမကျပါဘူး။ အရေးကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ နှုတ်၏ဆောင်မခြင်း၊ ကိုယ်၏ဆောင်မခြင်းနဲ့ အတူတစ်ကွ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းပြီး ကျော်လွှားကြဖို့က ပိုအရေးကြီးသလို ပိုပြီး အပြုသဘော ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ စည်းလုံးညီညွတ်နေသမျှ အရာရာကို လွယ်ကူစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ (Referendum မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ စည်းကမ်းကျန စည်းလုံးညီညွတ်မှုကြောင့် အောင်မြင်မှုရခဲ့တာ သာဓကယူနိုင်ပါတယ်)။ ဒါကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ရွှေမြန်မာများအားလုံး မိမိတိုနဲ့ မဆိုင်သလို မနေပဲ တတ်နိုင်သရွေ့ အကြောက်တရား နဲ့ အတ္တကို အနည်းငယ်မျှ ဖယ်ရှားပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ မိမိတို့ လိုချင်တောင့်တသော ပန်းတိုင်ကို အတူတစ်ကွ လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Comment by Lun Lunn
August 14, 2008 @ 7:13 am Reply	လင်းလက် …
ညီမရဲ့ လူပင် ငယ်သော်လည်း လူပီသစွာ ရဲဝင့်ပြတ်သားမှု၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးမှု၊ မျိုးချစ်စိတ်ကြီးမားမှု တို့အတွက် အမြဲ ဂုဏ်ယူနေမှာပါ။
August 14, 2008 @ 7:18 am Reply	ညီမလေးရေခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက်အတွက် ကျေးဇူး အထူး..။
Comment by Moe Cho Thinn
August 14, 2008 @ 5:35 pm Reply	ဖတ်သွားတယ်ညီမ..
အကို့ဘလော့ဂ်ထဲက ဒီပို့စ် နဲ့ လင့်ခ်ထားပါတယ်။
Comment by TZA
August 14, 2008 @ 7:02 pm Reply	I do agree with you for this article!!!!! Sis Lin Let!!!!
Comment by YeKyawAungMDY
August 15, 2008 @ 2:46 pm Reply	this isavery mature way of write up, which did not mixed with emotions. keep up..🙂 zy
sg gov is using these tactics as precedents for future to frighten people.
” ဤမြေပေါ်နေလျင် ဤမြေ၏ စည်းကမ်းကိုတော့ လေးစားရမယ်ဆိုတာ သင့်လျော်ပါတယ်။ လူ့လောကကြီးမှာ လူတွေရဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို တသမတ်တည်းတော့ ထားလို့မရပါဘူး .. ။ တခါတလေ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ၊ လူတွေမှာ ရွေးချယ်မှု မရှိတော့တဲ့အခါ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် တုံ့ပြန်မှုဆိုတာကလည်း မျှမျှတတ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ “
August 17, 2008 @ 1:15 am Reply	Pack ur back and ready to go back?
August 23, 2008 @ 3:53 pm Reply	I heard news that “Lin Let” been arrested and they will deport her to “Thailand”. Ko pauk
August 27, 2008 @ 5:38 pm Reply	ကျွန်မ ကိုယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ် အလုပ်များနေခဲ့တာပါရှင်။ အဖမ်းမခံရပါဘူး။ ဘယ်ကဘယ်လို သတင်းမှားတွေ ထွက်နေကြပါလိမ့် .. ။ နောက်၁နှစ်ထိတော့ စင်္ကာပူမှာ နေခွင့်ရှိပါသေးတယ် .. ။ နောက်၁နှစ်ရောက်မှပဲ ဘာဖြစ်မလဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ ..🙂
Comment by LIN LET KYAL SIN
August 28, 2008 @ 1:56 am Reply	အေးလေ အခုပဲကြည့်လေ…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မရှက်တတ်ဘူး အခုထိ..နင်တို့ လို လေထဲက ပြောတဲ့သူတွေရှိလို့ လည်း ဟိုမှာ တကယ်ခံသွားရတဲ့သူတွေက ခံသွားရတာပဲ.. နင်တကယ်ဒီလောက် နားလည်ပါတယ်.. ပေးစပ်နိုင်ပါတယ်ဆို အခုပါသွားတဲ့ထဲမှာ ဘာလို့ ပါမသွားတာလဲ.. ပြောတော့ဖြင့်တစ်လုံးတစ်ခဲပီးရင် ဘယ်နားသွားနေ နေမှန်းမသိဘူး.. ပီးသွားရင် ပြန်ပေါ်လာပြန်ပီ.. ဒါနင်တို့ သောက်ကျင့်ပဲ.. အေး ငါ့ကွန်မန်ကို ဖျက်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. နင်ဖတ်ရင် ပီးတာပဲ.. ရှက်တတ်ရင် တော်တော်ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဟာ.. တွေးရင်းတွေးရင်း နင်တို့ လိုလေသမားတွေကိုပဲ ပိုပီးသောက်မြင်ကပ်လာတယ်.. လုပ်လိုက်ပါ့လား.. အောင်မလေးရေထဲမိုးထဲဆို ဘယ်မှာမှန်းမသိဘူး.. ပီးရင်တော့ပြောပါပီ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင် သူ့ ကိုမမှီသလို ဘာလိုလို.. လေးစားလောက်ပါပေတယ်.. အမိ.. နဖူးလေးပေါ်လက်တင်ပီး ဖြေး၂လေး တွေးကြည့်ပါအုံး..
Comment by http://www.pankyaung.blogspot.com
August 31, 2008 @ 7:40 am Reply	ကြောင်လှချည်လား pankyaung. အခုလို လာပြောကတည်းက တော်တော်ကြောင်နေပြီဆိုတာ သိသာတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ မိမိရောက်ရာနိုင်ရာမှာ မိမိနိုင်တာလေးပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဟာ စာရေးသူ .. ။ စာရေးသူပါဆိုမှ စာမရေးဘဲ လက်နက်သွားကိုင်ရမှာလားရှင်။ စင်္ကာပူကနေ ထွက်သွားရတယ်ဆိုတာ ဘလိုင်းကြီး ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ နေထိုင်ခွင့်ကုန်မှ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ။ အကုန်လုံး တပြုံကြီး မထွက်သွားရသေးလို့ နေထိုင်ခွင့်ကျန်နေသေးတဲ့လူတွေကို စော်ကားမော်ကား ရှင်အခုလိုပြောနေတာ ဘယ်လောက် စဉ်းစားအသိဥာဏ်နည်းလဲဆိုတာ အံ့ပါရဲ့ရှင်။ အခုလို ကြောင်တောင်တောင် ကွန်မန့်ကို တင်ပေးရတာပဲ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေပါပြီ။ အချိန်ပေးပြီး ကျွန်မစာတွေလာဖတ် ၊ ဒေါသထွက်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
September 1, 2008 @ 2:13 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI